ko htike's prosaic collection: ရေလယ်ခေါင် သောင်ထွန်း နတ်သမီး နေတဲ့ကျွန်း
good writing, bravo!
Sad to read this article.. Some of good Myanmar girls are losing their pride because of the proverty..The Military Goverment is responsible for this acton..
Sad to read this article.. Some of good Myanmar girls are losing their pride because of the proverty..The Military Goverment is responsible for this condition...
Thu Ye said...
I'm also so sad to read this article. Totally agree with, what Ohnmar said.
People should be more aware of the risk of AIDS. One of my friends, an NGO officer, said that it is more difficult to educate prostitutes about AIDS because prostitution is illegal in Burma. The numbers of AIDS patients in Burma must be much higher than the official government figures. However men who seek sex for pleasure also havearesponsibility and should use condoms to protect themselves and to stop the spread of AIDS in the country.
People should be more aware of the risk of AIDS. One of my friends, an NGO officer,
Yahtay is right.Ko Ktike should go back to Burma and help them like NGO groups
I am so sad to read this article.I use to live in 40th street (middle) last 30 years ago.
We use to playing around in this area very safe and specially weekend no body in this area.
If you live in kyauktada towmship everybody know each other.Specially this season (War Dwin)
We offer the food for the monks ,So thatalot of monks come down the Da Ma Youne (community center) and them they collect the food.
It is my childhood marmore.
လယ်သမားကြီးတစ်ယောက် မြို့ပေါ်က စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ထဲကို ၀င်လာပြီး ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို ဖားခြေထောက် တစ်သန်းလောက် လိုချင်လားလို့ မေးပါတယ်။ ဆိုင်ပိုင်ရှင်လည်း အံ့သြသွားပြီး ဒီလောက်များတဲ့ ဖားခြေထောက်တွေကို ဘယ်ကရမှာလည်းလို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ လယ်သမားကြီးက “ကျုပ်အိမ်နားက ရေကန်တစ်ကန်ထဲမှာ ဖားတွေအပြည့်ပဲ။ တစ်သန်းလောက် ရှိတယ်။ အဲဒီ အကောင်တွေ တစ်ညလုံးကို အော်ဟစ်ဆူညံနေတာ။ ကျုပ်ရူးတောင် ရူးချင်တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ လယ်သမားကြီးတို့ တစ်ပတ်ကို ဖားအကောင်(၅၀၀) နှုန်းနဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဖို့ သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။
ပထမဆုံးအပတ်မှာပဲ လယ်သမားကြီးက ဖားပိန်လေး(၂)ကောင်ကို ကိုင်ရင်း ရှက်တက်တက် မျက်နှာပေးနဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ ဆိုင်ပိုင်ရှင်က “ခင်ဗျား... ဖားတွေရော” လို့ မေးတော့ လယ်သမားကြီးက “ကျုပ်... မှားပြောတာဗျ။ အမှန်က ကန်ထဲမှာ ဒီ(၂)ကောင်ပဲ ရှိတာ။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်တွေရဲ့ အသံက တော်တော့ကို ဆူတာပဲဗျာ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို ဝေဖန်ရှုံ့ချတာ၊ လှောင်ပြောင်သရော်တာ ကြုံတိုင်း ဒါဟာ သံသေးသံကြောင်နဲ့ အော်နေတဲ့ ဖား(၂)ကောင်ပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိရလိုက်ပါ။ ပြဿနာတွေဟာ အမှောင်ထဲမှာ (ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရခင်မှာ) ပိုပြီး ကြီးမားသယောင် ဖြစ်နေတတ်တာကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့။ ဖားအကောင် (၁)သန်းလောက်ရဲ့ အော်သံတွေလို ကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးဖိစီးနေတဲ့ အရာတွေအတွက် အိပ်ယာထဲမှာ စိတ်ပူပန်မှုကြီးစွာ ဖြတ်သန်းရတဲ့ ညတွေ ကြုံဖူးပါသလား။ တကယ်တော့ နောက်တနေ့ မနက်ရောက်လို့ ပြဿနာကို သေချာဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ်ပူပန် တုန်လှုပ်နေတဲ့ကိစ္စ ဘယ်လောက် သေးငယ်သလဲဆိုတာကို တအံ့တသြ တွေ့ရဖို့များပါတယ်။
26 July 2008 at 09:35
ayemyat099 လေးက ”ဖား” စိတ်ဝင်စားတယ်နော်...အဟက်...:D
26 July 2008 at 19:17
ဒီအကေ့ာင်းအရာကို ရေ့းကတာများပါပြီ။ ဖတ်ရတာလဲ မနဲတော့ပါ။ ယခုစာမှာ စာရေးသူဟာ စာနာစိတ်အ့ပည့်နဲ့ ရသမေ့ာက်အောင် ရေးနိုင်ပါတယ်။
Ko htike didn't write this post..he just Copy and Paste from Mizzima...he mentioned too
People should understand that most of the girls are doing this kind of job not only for them but also for their families, to feed their old parents, little brothers and sisters. Some people disrespect to this kind of girls and think the girls are doing this job for their pleasure and make up and fashion clothes. I think that is so wrong opinion. I believe that Burmese girls want to be respectful women and to live in the respectful lives. But they have no chance to live how they want. I am so sorry for them. May they haveagood life in their next life.